Ihe nzacha dị na mpụga maka akwarium: nke kacha mma na otu esi ahọpụta nke gị | Azu
Ihe nzacha dị na mpụga maka akwarium
Portillo nke German | | Ngwa, Mmiri aquarium
Nwere ike ịnwe akwarium ma chọọ ịdebe ya ọcha ma sie ike dịka o kwere mee ka azụ gị nwee ike ibi n'ọnọdụ kachasị mma. Iji mee nke a, ọ chọrọ ụfọdụ ihe na ngwaọrụ ndị na-enye aka iji meziwanye mmezi ya. N'etiti ihe ndị ahụ, anyị na-enweta ihe ntanetị nri na mmiri ikuku oxygen. Taa, anyị ga-ekwu maka ya ihe nzacha mpụga maka akwarium.
Chọrọ ịma nke bụ ihe kachasị mma na mpụga mpụga maka aquariums na ihe ị kwesịrị iburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ ha? Ọfọn, na-agụ, n'ihi na nke a bụ post gị 🙂
1 Ihe nzacha kachasị mma nke mpụga maka akwarium
1.1 Mpụga dị ọcha maka akwarium ọcha na acha anụnụ anụnụ
1.2 Nwa na-acha uhie uhie na iyo
1.3 Ọrụ iyo
1.4 Mpụga cascade nyo
1.5 Mpụga mpụga maka aquariums nwere 3 sponges
1.6 Ihe nzacha akpa mpụga
1.7 Iyo na 55W moto
2 Ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ ihe nzacha mpụga maka akwarium
4 Etu esi wunye nzacha aquarium mpụga
5 Ugboro ole ka ị ga-ehicha ya?
6 Otu esi ehichapu ihe nzacha aquarium na mpụga
Ihe nzacha kachasị mma nke mpụga maka akwarium
Tetra EX 800 Plus - Tọọ ...
Fluval A440 107 Myọcha ...
Mpụga dị ọcha maka akwarium ọcha na acha anụnụ anụnụ
Typedị nza a dị ezigbo mma ma na-agbanwe agbanwe. Ọ nwere ike ịmịchaa mmiri na aquariums nwere ikike ruru lita 400. A na-eji ya nhicha mmiri nke aquariums mmiri ọhụrụ na nnu. Nzukọ ahụ dị mfe ma tinye oghere atọ dị iche iche. Ihe bụ ihe ọzọ, iyo na-arụ ọrụ na nkebi. Nke ahụ bụ, ọ naghị arụ ọrụ otu ike mgbe niile. Ọ dị ezigbo mma na ịchekwa ike ebe ọ bụ na, mgbe ọ na-adịchaghị mkpa ịza mmiri, ọ dịghị mkpa ịrụ ọrụ zuru oke.
Ọ bụ nzacha ị nwere ike zụta ebe a.
Nwa na-acha uhie uhie na iyo
Mmiri Hydro 104I-HY / C01103 ...
Ihe nzacha a nwere ihe mara mma nke na-acha uhie uhie na oji. Akụkụ kasịnụ nke nzacha a bụ uzo. Teknụzụ ya na-ekwe nkwa nchebe ka mma iji zere ụdị aquarium ọ bụla gafere.
Isi nyo ka nke roba na ọ bụ nnọọ jụụ. Ọ na-ehicha mmiri nke ọma ma hapụ ya ka ọ dị ọcha.
Nwere ike ịzụta ya ebe a.
BPS ọkachamara Myọcha ...
Filterdị ụdị ndị ọzọ a na-ahụ maka ọrụ na-anọdụ na nsọtụ nke akwarium ahụ ma dị ka akpaazụ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka aquariums ndị ahụ nwere obere ọkara. Ọ nwere igwe mgbapụta pụtara jụụ nke na-ewe mmiri sitere na akwarium A na-ezigazi ya na tank ebe a nụchara ya ma mee ka ọ dị ọcha ka ọ laghachi ọzọ. Ya oru oma filtration technology ga-enyere aka mee ka mmiri gị dị ọcha maka ogologo.
Ọnụ ya dị oke ọnụ, zụta ya.
Mpụga cascade nyo
Onwe ya - Mpụga Mpụga ...
Ihe nzacha a nwere ezigbo oru oma. Ma ọ zuru oke iji tinye ya dị ka ihe ịchọ mma ma na-ewereghị ohere. Ọ bụrụ n’inweghị nnukwu akwarium, ụdị nyo a zuru oke. Ọ na-eme mkpọtụ dị ntakịrị ma dabara adaba maka azụ azụ na aquariums aqualum ndị ahụ na-ejikwa ya nsị.
Mpụga mpụga maka aquariums nwere 3 sponges
Ọ bụ nyo maka akwarium na enweghi ikike 120 lita. Ọrụ ya dị oke mma ma na-enye gị ohere ịhazi ụzọ mmiri na ntaneti na valvụ multifunction. Ọ bụ nnọọ nkịtị na adabara ma ọhụrụ na nnu mmiri.
Zụrụ nzacha a Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla..
Ihe nzacha akpa mpụga
SunSun HBL-302 nyocha ...
Typedị nza a nwekwara ụdị akpa azụ. O zuru oke na ịnwe ike itinye ya na akwarium na-ebughị oke ohere. Ọ pere mpe ma arụmọrụ ya dị ka ọtụtụ ndị buru ibu. Ọ na - enye gị ohere ịza mmiri n’ụzọ dị mfe iji mee ka azụ na algae nwee ahụ ike ogologo oge o kwere mee.
Ọ bara ezigbo uru na ego. Pụrụ ịhụ ya ebe a
Iyo na 55W moto
Ndị nzacha a nwere moto 55W nke oru ya na nkwanye ugwu na gburugburu ebe obibi. Ihe nzacha a dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ime ka mmiri dị ọcha na nnukwu tankị nke ihe ruru lita 2000 nke mmiri. O nwekwara onye nkọwapụta 9 W yana nzacha tupu nke na-enyere aka wepu unyi kachasiri elu ka nnukwu nzacha ghara ịka njọ.
Leeị pụrụ ịhụ ya price.
Ihe ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ ihe nzacha mpụga maka akwarium
Dịka anyị kwurula banyere ya n’isiokwu ndị ọzọ, nzacha mmiri bụ ihe dị ezigbo mkpa iji nwee ọnọdụ kacha mma maka azụ gị. Idebe mmiri dị ọcha na ikuku oxygen bụ ihe egosipụtara ọ bụrụ na anyị chọrọ ka azụ anyị tolite nke ọma ma nwee ogologo ndụ. Na mgbakwunye, n'ụzọ a anyị agaghị agbanwe mmiri na akwarium ọtụtụ mgbe.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-ahụ ọtụtụ nzacha nke mpụga maka ụdị akwarium nke ụdị dị iche iche. Ọ bụ mgbe ahụ ka ọrụ nke ịmara nke ọma onye ọ ga-ahọrọ na-esi ike. Iji họrọ nzacha nke kachasị mma maka mkpa anyị, anyị ga-eleba anya n'akụkụ ụfọdụ.
Nke mbu bu imata kpomkwem uzo akwukwu a iji mara ụdị mmiri anyị ga-enyo iji mee ka ọ dị ọcha mgbe niile. Gbalị nyocha mmiri na aquarium lita 50 abụghị otu ihe dị ka lita 300. Ihe nzacha dị na mpụga bụ nhọrọ kachasị mma maka obere akwarium. Ọ bụrụ na anyị etinye ihe nzacha dị n'ime ma ohere maka azụ dị ntakịrị, anyị ga-egbochi nnwere onwe ha igwu mmiri. Ya mere, ọ kachasị mma ịtọba ha na mpụga ka ha nwee ike rụọ ọrụ ha nke ọma.
Akụkụ nke abụọ ị ga-atụle bụ mmefu ego. Dika enwere otutu uzo, enwere otutu ego. Ihe kachasị mma bụ inyocha ọrụ dị iche iche nza ahụ nwere ka anyị nwee ike ịhọrọ nke kacha mma maka ọnọdụ anyị.
Ihe kachasị mma ịzụta ihe nzacha kachasị mma maka ọnọdụ anyị bụ ịtụle ọrụ ọ nwere. Ọ bụ ngwaọrụ bụ isi nke na-enyere aka mee ka mmiri dị ka o kwere mee ma mee ka ọ ghara ịdị na-adịghị ọcha nke a na-etolite ka ndụ na-etolite na akwarium. Adịghị ọcha dị ka iberibe nri, nsị azụ ma ọ bụ epupụta ahihia. Ihe ndị a niile na-eme ka mmiri dị na mmiri dị na azụ wee chọọ nyocha ya. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-agbatịkwu oge ọ na-ewe iji gbanwee mmiri ahụ.
Gbaa mbọ hụ na ntinye nke nzacha mpụga dị mfe ma kwụsie ike. Njikọ ndị dị n'èzí site na hoses na valves zuru oke maka mmiri ka ọ na-agagharị n'enweghị nsogbu ma dị ọcha karịa ngwa ngwa. Ka ike nzacha ahụ nwere, mmiri ọ nwere ike ihicha kwa otu oge.
Naanị ọghọm dị na nzacha aquarium nke dị na mpụga bụ na ha na-ewepụta mkpọtụ mgbe ejiri ha. Ha na-enwekarị ọnụahịa kachasị elu, n'agbanyeghị asọmpi. Iji zere nsogbu ndị a, anyị emeela nhọrọ nke nzacha kachasị mma ebe a.
Etu esi wunye nzacha aquarium mpụga
Mgbe ị na-etinye nzacha mpụga maka aquariums ọ bụ ihe nkịtị inwe ụfọdụ obi abụọ. Akụkụ ndị dị na ya bụ: ihe nzacha ahụ, ọkpọkọ aquarium, ihe nza, ihe ndozi na mpụta. Ka anyị hụ otu esi agbakọ usoro nzacha aquarium:
Ihe mbu bu ichopu hoses nke akwarium aquarium. Iji mee nke a, anyị na-ejikọ ogwe ọkụ na-agbasa na arc. Ogwe a na-ekesa ihe bụ onye na-ahụ maka ịwụsa mmiri ozugbo a kpochara ya n'ime akwarium.
Anyị na-etinye atịchok na aquarium na iko iko. Anyị na-ejikọta eriri mmiri ịsa ahụ na eriri mmiri na ntinye mmiri nke nzacha.
Hodọ ndị a na-abanyekarị na tub dị iche iche na nrụgide. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ha gbanwee, i nwere ike kpoo ha ntakịrị.
Iji gbagoo ihe nzacha ahụ, ị ​​kwesịrị ị paya ntị na nduzi nke mgbasa mmiri n'ime akwarium. A ghaghị itinye ihe ndị na -ebi ndụ na-edozi ahụ ka e wee nwee ike ịmepụta ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị mkpa maka ogige nke nje nitrifying iji guzobe.
Ozugbo akụrụngwa ihe eji arụ ọrụ dị, anyị na-etinye ihe nzacha kemịkalụ dịka carbon arụ ọrụ. Ọ na-adọrọ mmasị ịlele na ihe nza niile nwere ezigbo arụmọrụ ma na-arụ ọrụ na mgbidi nhicha ahụ.
Ugboro ole ka ị ga-ehicha ya?
Otu uru puru iche ndi osisi ndia nwere karie ndi ozo bu na ha achoghi obere mmezi. Naanị hichaa mpempe mpụga kwa ọnwa 3 ma ọ bụ 6 ma ọ bụ mgbe ị nwere ike ịhụ nbelata nrugharị. Ọ dịghị mkpa nhicha ugboro ugboro iji gụọ ya dị ka ọrụ mmezi.
Otu esi ehichapu ihe nzacha aquarium na mpụga
Mgbe nhicha nyo e nwere ụfọdụ obi abụọ. Ka anyị hụ otu esi ehicha mpụta mpụta. Ọ bụrụ na ị ga-edochi otu n'ime ihe nzacha, ọ naghị atụ aro ka ị nọchie ihe karịrị otu oge. Ọ bụrụ na ịmee otu a, ịnwere ike ida mba chịrị nje dị mkpa maka ezigbo mma mmiri.
Iji hichaa foamex mgbe niile, a ga-eji mmiri akwarium mee ya. Ebumnobi ahụ bụ otu ihe, ọ bụghị ịhapụ ngalaba nke nje. Ọ dịghị mkpa ịgbanwe nti ntị n'ihi na ha nwere ike ịdịgide adịgide ruo ọtụtụ afọ. Naanị hichaa ha ma ọ bụrụ na anyị nwere ya unyi. O zuru ezu iji mmiri akwarium sachaa ha.
Ihe dị mma bụ iji mee ka ọnụ ọgụgụ nke nje bacteria dị ike mgbe niile. Oge ọ bụla anyị na-ehicha nzacha, ihe kachasị mma bụ ịgbakwunye nje ọhụrụ na ụfọdụ ngwaahịa akwadoro maka ebumnuche a.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nzacha akwarium ndị dị na mpụga ma họrọ nke kachasị amasị gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Azu » Mmiri aquarium » Ihe nzacha dị na mpụga maka akwarium
Ajịrịja ajị anụ Aquarium